China Hyperbolic aluminium veneer fekitori uye vanotengesa | Jixiang
Hyperbolic aluminium veneer ine chitarisiko chakanaka chinoratidza maitiro, inogona kugadzira zvivakwa zvakagadzirirwa, uye inogona kugadzirwa uye kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi kuzadzisa zvido zvekuvaka zvebato rekuvaka. Iyo yakapetwa yakapetwa aruminiyamu veneer inotora yemukati chimiro isina mvura uye yekuisa chisimbiso kurapwa, kuitira kuti ive nechokwadi chekushomeka kwayo kwemvura kushanda kusvika padanho rakakura. Inogona zvakare kushandiswa pamusoro peiyo hyperbolic aluminium veneer Tsvina mavara akasiyana siyana epende kuti uwedzere kusimudzira zvinoonekwa. Kugadzirwa kwehyperbolic aluminium veneer kwakanyanya kuomarara, uye izvo zvinodiwa pakururamisa kwemuchina uye mashandiro ekushanda kwevashandi vehunyanzvi akareba zvakanyanya, saka iyo hyperbolic aluminium veneer ine yakasimba hunyanzvi hwehunhu. Iine hunhu hwehuremu hwakareruka, kuomarara kwakanaka, simba rakakwira, isina moto uye hunyoro-chiratidzo, kumisikidza kuiswa uye kugadzirisa, uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Yayo yakasarudzika arc chimiro inogadzira iyo yakavezwa pamusoro zvivakwa uko kwakajairwa aruminiyamu veneer isina basa. Nekuti mitsara yekunze kwemadziro kushongedza inoenda kubva kumadziro kuenda kune dhizaini yemamwe arc makombama, inosimbisa inochinjika uye inochinjika hunyanzvi mamiriro.
1. Chimiro chakasarudzika, kuratidza runako rwechiso chakakombama;
2.Ukukura, chimiro uye kuputira kwepamusoro kunogona kugadzirwa.
3. Ruvara, huni hwezviyo uye zviyo zvematombo zvinowanikwa zvakanyanya, uye iko kushongedzwa kwakanaka;
4. Kwakanaka kuzvichenesa, kwete nyore kusvibisa, nyore kuchenesa uye kuchengetedza, yakaderera mari yekugadzirisa;
5.Humanized dhizaini dhizaini, iri nyore kurodha uye kudzikisa, kuiswa nyore uye kuvaka;
6. Yakasarudzika mhando, yakasimba, refu hupenyu hwebasa, kudhura kuita;
7. Iyo yekunze yepamusoro yekupfeka yunifomu, inopenya, inopfeka isingagadzirike uye haina kukwenya, uye hazvisi nyore kuparara;
8. Inogona kudzokororwazve uye kushandiswazve, izvo zvinobatsira kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Inoshandiswa zvakanyanya muzvipatara, nzira dzepasi pevhu, zviteshi, nhandare, mamiziyamu, dzimba dzemusangano, nzvimbo dzekupedzisira dzehotera, nezvimwe;
Pashure: 4D kuteedzera huni zviyo aluminium veneer
Zvadaro: Antibacterial uye antistatic aluminium epurasitiki ndiro